उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पुनः ओरालो लाग्न थाल्याे
काठमाडाै‌ं, Jan 11, 2020
पछिल्लो समय लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले घटेको छ। बुधबारको तुलनामा बिहीबार पनि प्रतितोला रु एक हजारले सुनको मूल्य घटेको थियो।
शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७४ हजार ६०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७४ हजार ३०० पुगेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला र ७५ हजार ५०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार २०० पुगेको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ। बिहीबारको तुलनामा रु १५ ले घटेर चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ८८५ पुगेको छ।
प्रकाशित मिति: Jan 10, 2020 13:16:51
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको ९७ हजार
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, आज एकैदिन प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले वृद्धि
आइतबार कति तोकिएको सुन चाँदीको भाउ ? यस्तो छ दरभाउ
सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, तोलाको कति?
घट्यो सुनको भाउ, तोलाको ९५ हजार ८ सय
बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा ७ सयले घट्यो, ९७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार